Ny Galaxy S9 sy S9 + dia mifanaraka amin'ny karatra microSD hatramin'ny 400 GB | Androidsis
Omaly dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny MWC ny sainam-pirenena vaovao an'ny orinasa Koreana Samsung: Galaxy S9 sy Galaxy S9 +, izay nomenay ny kaonty mendrika ao amin'ny Androidsis. Araka ny hitantsika ny endriny dia mitovy ihany, misy kely fotsiny ny fahasamihafana kely amin'ny famolavolana sy ny lanjany momba ny teo alohany.
Ny niova, ankoatry ny atiny dia ny fakantsary, iray amin'ny fanatsarana lehibe azony raha oharina amin'ny teo alohany ary izany dia nifantoka tamin'ny ampahany tsara tamin'ny fampisehoana ofisialy omaly. Zava-baovao iray hafa hita ao amin'ny toerana fitahirizana, satria ny orinasa dia tsy handefa maodely 64 GB fotsiny fa handefa kinova roa hafa koa 128 sy 256 GB.
Ny maodely teo aloha, na ny Galaxy S8 na ny Galaxy S8 + dia namela anay hanitatra ny toerana fitahirizana hatramin'ny 256 GB amin'ny fampiasana karatra microSD. Saingy ny taranaka vaovao an'ny sainan'i Samsung, ankoatry ny fanolorana toerana fitahirizana vaovao, nanitatra ny fifanarahan'ny karatra microSD tohanan'ny, amin'izay miaraka amin'ity taranaka vaovao ity dia afaka mampiasa karatra micro SD hatramin'ny 400 GB izahay mba hanitarana ny toerana fitahirizana.
Ny ankabeazan'ny finday avo lenta sy avo lenta izay natomboka tamin'ny taon-dasa, dia tonga miaraka amin'ny fitehirizana 64 GB, fitehirizana izay azontsika atitatra amin'ny alàlan'ny karatra microSD, miaraka amin'ny 256 GB ny fahaiza-manao ambony indrindra. Ankehitriny, ny toerana ilaina amin'ny fiainana andavan'andro ho an'ny mpampiasa mahazatra manana 64 GB eo ho eo, noho ireo serivisy fitahirizana rahona samihafa, serivisy ahafahantsika manana ny mombamomba antsika rehetra voatahiry tsara amin'ny alàlan'ny Internet ary koa afaka manatona hevitra amin'ny fotoana rehetra ilaina nefa tsy mila mihetsika ara-batana amin'ny fitaovantsika.
Ny vidin'ny karatra microSD 256 GB Samsung dia mihoatra ny 100 euro, satria tsy fantatrao amin'izao fotoana izao hoe inona ny mahasamihafa ny vidiny eo anelanelan'ny modely 128 sy 256 GB, dia mety ho safidy tena tsara ny dinihina fa tsy mividy maodely manana fahaiza-manao ambonimbony kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy S9 sy S9 + dia manohana karatra microSD hatramin'ny 400GB
Sary vaovao an'ny Huawei P20 no sivana manambara famolavolana mahavariana